[Famerenana amin'ny alina] Mifandona amin'ny Erotika hafahafa amin'ny 'After Blue' ny Sci-fi
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly [Famerenana amin'ny alina] Mifandona amin'ny Erotika hafahafa amin'ny 'After Blue' ny Sci-fi
by Brianna Spieldenner Novambra 4, 2021
by Brianna Spieldenner Novambra 4, 2021 935 hevitra
Mbola mieritreritra Dune, fa enga anie mba ho maro loko, hafahafa ary pelaka? Aza mijery lavitra an'i Bertrand Mandico (Ny Wild Boys) epic sci-fi After Blue (Paradisa maloto) izay mamorona tontolo nofinofy hafahafa sy hafahafa amin'ny fampiasana vokatra fakan-tsary azo ampiharina.
Ny fahafantarana tanteraka an'ity sarimihetsika ity dia ezaka tsy misy dikany. Avy amin'ny talen'ny mpisava lalana ny hetsika sinema incoherent, ny fankasitrahana ny sarimihetsika arthouse sy ny fialan-tsiny amin'ny teti-dratsy dia ilaina mba hankafizana ity sarimihetsika ity. Mba tsy ho variana amin'ny karazana tokana, ity sarimihetsika ity dia azo lazaina tsara indrindra ho toy ny trippy, sary azo ampiharina ary erotisma mandika lalàna voafono ao anaty fikatsahana ny mahery fo tandrefana sci-fi.
Ny sarimihetsika dia manomboka amin'ny sary miloko marevaka, feno famirapiratan'ilay mpilalao sarimihetsika antsoina hoe Roxy (fa ny tovovavy ao an-tanàna dia miantso azy hoe Toxic) nilalao an'i Paula Luna. Ny feon'ny feony dia manazava fa miaina ao amin'ny planeta After Blue izy ireo, izay mahatonga ny rivotra haniry volo amin'ny vatany rehetra ary maty ny lehilahy satria nitombo tao anatiny ny volony ka tsy maintsy ampidirina artifisialy vao miteraka. Raha toa ka toa tombantombana azonao ankafizinao lavitra izany, dia mety ho tafiditra ao ambadik'ity sarimihetsika ity ianao.
Nirenireny teny amoron-dranomasina i Roxy raha nisy ankizivavy telo nifandimby nampijaly azy sy nifampitady. Tafintohina tamin'ny loha nipoitra avy teo amin'ny fasika izy, ary hitany fa vehivavy iray antsoina hoe Kate Bush (Agata Buzek) no nalevina hatramin'ny lohany satria voasazy noho ny faharatsiany. Nolazainy tamin'i Roxy fa raha manafaka azy izy, dia homeny ny faniriany telo. Nanafaka azy i Roxy, ary novonoiny haingana ireo zazavavy telo ary niteraka korontana manerana ny tany. Roxy sy ny reniny, ilay mpanao volo tao an-tanàna, dia voaroaka tsy ho ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo raha tsy mamono an'i Kate Bush, ka manomboka ny dia.
Sary natolotry ny Nightstream
Zavatra hafahafa hafa izay mahatonga azy io ho ao anatin'ny tantara: toe-javatra ara-nofo mivadika ho fanafihana tentacle, basy nomena anarana amin'ny marika lamaody, nipples goo sy marbra, ary ny filaharan'ny matoatoa.
Na dia tantara mampientanentana aza izy ity, aza manantena ny hahita tetika mifanentana be eto. Ny lojika anatiny ao amin'ny tetika dia mibaribary kokoa, toy ny hoe amin'ny hallucinogens. Nalaza ny tale taorian'ny sarimihetsika nataony teo aloha, Ny Wild Boys, izay mitovy loko, kanto ary mandika lalàna.
Amin'ny fomban'i Lars Von Trier sy ny hetsika Dogme 95 an'i Thomas Vinterberg, i Mandico dia nanoratra ny manifesto incoherence, ny iraka amin'izany dia ny hankalaza ny sinema ho endrika zavakanto misavoritaka izay tsy tokony hotazonina amin'ny fomba manokana na fivoriambe manokana, ary izy ireo dia tsy maintsy alaina amin'ny tahiry sarimihetsika lany daty ary mampiasa vokatra fakan-tsary azo ampiharina ihany. Raha ity sarimihetsika ity no manifestony amin'ny fampiharana, dia mora ny mahita ny mety hahomby na tsia. Lafin-javatra maro amin'ny singa surreal sy abstract no miasa ary maneho ny talentan'ny mpanatontosa sarimihetsika iray, saingy ny teti-dratsy manjavozavo sy tsy feno dia mety hanimba ny maro.
Ankoatra izany, fety hita maso hankafizana ity sarimihetsika ity. Ity toerana apokalyptika vahiny ity dia mamirapiratra miaraka amin'ny lokony manonofinofy, sombin-javatra hafahafa ary akanjo marevaka sy makiazy izay mameno ity toerana hafa ity.
Ireo mpilalao sarimihetsika dia midera an'ity dystopia hafahafa ity. Manjaka eo amin’ny toerana misy azy izy ireo, mifandray amin’ny herin’ny biby sy ny filan’ny nofo. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nisy olona roa niady, ny manaraka dia nifandona.
Amin'ny ankapobeny dia manohana tsy misy tsiny ny fikatsahana ny fanirian'ny vehivavy ilay sarimihetsika. Miaraka amin'ny fomba fanaovana sarimihetsika tsy manam-paharoa sy ara-javakanto ao anatin'izany ny filaharana mivelatra ahitana jiro miloko tsara tarehy, manjelanjelatra, volom-borona ary miboridana, ny sarimihetsika dia tonga toy ny tononkalo kokoa noho ny sarimihetsika.
Ho fanampin'izany rehetra izany, ny isa synth dia mameno ny fihetseham-pon'ny sarimihetsika. Amin'ny endriny, ity sarimihetsika ity dia miakatra ambony miaraka amin'ny fihoaram-pefy miloko sy ny hakingan-tsainy amin'ny fanaovana sarimihetsika. Indrisy anefa fa tsy afaka mahazaka ireo andiana fantastika mametraka azy ilay tetika. Na dia manomboka amin'ny fampanantenana aza, ny tapany faharoa dia toa mihodinkodina ao anaty zavona tahaka ireo mpilalao ao amin'ny sarimihetsika.
Miaraka amin'ny aventure lehibe toy ny Ny Odyssey or Dune fa ny hafahafa kokoa, ity sarimihetsika arthouse ity dia manana fitarihana ara-javakanto mahatalanjona nefa tsy ampy ny tantara hifanaraka amin'izany.
Jereo ny fandrakofana Nightstream bebe kokoa momba ny "Anarana ambony anarana"Ary"Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra. "
Zahao eto ambany ilay tranofiara.